Shiinaha Warshadaha Nidaamka tuuboyinka injineernimada Shiinaha, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Dawladda Hoose
HDPE biibiile fuuli jiray gidaarka
Aluminium Daawaha Daaha Plasti ...
PE gariiradda HDPE biibiile bixinta
Nidaamka dheecaanka gudaha wuxuu si cad u leeyahay faa iidooyin la barbardhigayo nidaamka dheecaanka hadda jira ee culeyska dhaqameed.
Ballaca Ballaca OD1800mm HDPE tuuboyinka biyaha la siinayo
Qalabka HDPE waa mid aan sun lahayn oo aan dhadhan lahayn. Waxay ka tirsan tahay qalabka dhismaha ee cagaaran oo aan weligood kor loo qaadin iyadoo loo marayo baaritaanka caafimaadka ee adag, kaasoo si wax ku ool ah u hagaajin kara tayada biyaha.
Tan iyo markii loo isticmaalay codsiyada biyaha la cabo 1970s, tuubooyinka cufnaanta sare leh (polyetylen) (HDPE) waxay noqdeen wax ku habboon nidaamyada dhuumaha loo isticmaalo in lagu qaado biyaha la cabbo. Maaddaama ay tahay shey adag oo adkeysi leh oo socon kara 100 sano ama in ka badan oo dayactir ugu yar leh, tuubo HDPE ah ayaa la caddeeyay inay ka sarreyso qalab kale oo badan oo tuubbo ah waxaana loo adeegsan karaa hab qaybinta iyo qaybinta biyaha la cabbo. Nolosha adeegga muddada dheer iyo qiimaha dayactirka oo yar yar ee tuubooyinka HDPE, oo ay weheliso awoodeeda iyo teknoolojiyad kala duwan oo leh jeexjeexyo yaryar, ayaa horseed u ah rakibidda tuubooyin HDPE ah oo leh qiimaha ugu hooseeya ee wareegga nolosha ee nidaam kasta oo tubbada biyaha la cabbo ah.
Ballaca Balaaran ee OD1600mm HDPE Biyo Biyo Bixinta ee Dawlada Hoose
sheyga HDPE waa mid aan sun lahayn oo aan dhadhan lahayn. Waxay ka tirsan tahay qalabka dhismaha ee cagaaran oo aan weligood kor loo qaadin iyadoo loo marayo baaritaanka caafimaadka ee adag, kaasoo si wax ku ool ah u hagaajin kara tayada biyaha.
Iska caabin wanaagsan daxalka. Dhuumaha waxay leeyihiin aashito aad u fiican iyo caabbinta alkali, iska caabinta daxalka, oo ku habboon warshadaha kiimikada.
HDPE rakiban tuuboyinka
Waxaa soo saaray walxaha birta ah ee aan sunta lahayn, dhadhanka iyo neverscaling, waxay si wax ku ool ah u horumarin kartaa tayada ciyaarta.
Dhuumaha dhulka hoostiisa ku jira ayaa kuleylka ka soo wareejiya dhulka una wareejiya dhisme si ay u helaan kululaynta meesha iyo ka hor kululaynta biyaha kulul ee guryaha.
Si weyn ayuu u kordhiyay awoodda tuubbada tuuboyinka (200 mitir oo dherer ah iyo 3 mitir oo dhexroor ah).
dn20/25/32/40/50/63/75/90/10/12/12/160/80/2002/225/50 Dhexroor weyn oo Biyo Biyo-dhaamis ah
Qalabka wax soo saarka: cufnaanta sare ee polyetylen
Isticmaalka alaabta: tuubada biyaha siisa
Heerka alaabta: dn20-dn800
Cadaadiska Magaca: 1.6Mpa
315/335/350/400/450/500/560/630/900 biiyaha balaastigga balaastigga weyn
Asalka alaabta: Xuzhou, Jiangsu
Qalabka wax soo saarka: HDPE
Heerka alaabta: dn315-900mm
Cadaadiska tuuboyinka: 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.6Mpa
Dhererka tuuboyinka: guud ahaan 12m, taageerid qaabeynta
Goobta Asalka: Dacwad, Jiangsu
Caddaymaha Product: 20mm * 3.2mm (dhexroor dibadda ah * dhumucda derbiga)